Teny amin’ny Rovan’Antananarivo aho
Accueil » Chronique » Teny amin’ny Rovan’Antananarivo aho
Rovan’Antananarivo, Rovan’Ambohimanga, Rovan’Ilafy, Rovan’Antsahadinta, Rovan’ Ambohidratrimo : tamin’ny Tendrombohitra Roambinifolo teto Imerina, dia izy dimy ireo sisa no nisy ho jerena, sy nahavantana ho tsidihina, mialoha ny nahamay (indray) ny Rovan’Ambohidratrimo farany teo.
«Eny amin’ny Rova» hoy isika mponin’Antananarivo rehefa hanondro ny faritra ambony misy azy, indrindra rahateo ny lapan’i Manjakamiadana taza-maso manodidina ary lavitra. Ilay fiteny hoe «Rovan’i Manjakamiadana», izay zary nahazatra loatra ny maro, dia fitenenana diso: ny Rova mantsy dia Lapa maromaro na vitsivitsy mano­- trona ny fasan’Andriana.
Ny Rovan’Antananarivo nahazatra, talohan’ny nahamay azy ny 6 novambra 1995, dia nahitana ny Lapa isany: Besakana, Mahitsielafanjaka, Tranovola, Manjaka­- miadana, Manampisoa, ny Fiangonana tranovato, ary indrindra ry Fitomiandalana sy ny Fasan’ny Lahy ary ny Fasan’ny Vavy.
Mpanjaka merina hatramin’ny andron’Andrianjaka, izay eken’ny lovantsofina fa naha Antananarivo an’Antana­- narivo tamin’ny 1610, no nafenina amin’ireo Fasana voatanisa ireo.
Roanjato taona taty aorian’Andrianjaka, rehefa vita ny fifanarahana iraisam-pirenena voalohany, tamin’ny 23 oktobra 1817, no nisalotra ny anaram-boninahitra hoe «Manjakan’i Madagasikara» Radama, zanak’Andria­- nampoinimerina.
Andriamasinavalona (taonjato faha-17) sy Andrianam­- poinimerina (1792-1810), samy tsy mpanjakan’i Mada­- gasikara fa nahavory kosa an’Imerina. Rehefa niamboho Andriamasinavalona dia nafenina tao amin’ny Fitomian­- dalan’ny Rovan’Antananarivo. Andrianampoinimerina kosa dia nafenina teny amin’ny Rovan’Ambohimanga, satria teny rahateo no nanandratra azy voalohany fony mbola Ramboasalama.
Radama (1810-1828), Ranavalona (1828-1861), Radama II (1861-1863), Rasoherina (1863-1868), Ranavalona II (1868-1883), Ranavalona III (1883-1897): ireo no Mpanjaka nampilomano an’i Madagasikara tamin’ny sehatra iraisam-pirenena. Neken’ny firenena tandrefana (United Kingdom, United States, Deutschland, Italia, France) ho «Mpanjakan’i Madagasikara» izy ireo na dia tsy tomombana tanteraka aza ny famorian-tany hoe «Ranomasina no valam-paria». Hatramin’ny mason’andro anio tokoa mantsy, dia izao isika miresaka izao, mbola misy foko manao indro kely amin’ny naha Mpanjakan’i Madagasikara tokoa, na tsia, ireo Mpanjaka Merina ireo. Anontanio anie ny Sakalavan’i Menabe, anontanio ny any Ankarana…
Raha ny Rovan’Antananarivo manokana, ankoatra ireo Mpanjaka dia misy ihany koa ny fianakaviany akaiky nomena voninahitra afenina tao amin’ny Fitomiandalana. Fasana ny Rova, Fasam-pianakaviana, ary Fasampianakaviana merina raha mbola eto Imerina Enin-Toko. Anontanio anie ny Betsileo, anontanio ny Sihanaka, anontanio ny Antemoro, sy ny havana hafa, fa fantany, ary ekeny, fa fasam-pianakaviana merina ireo Rova voatanisa tery am-piandohana: Rovan’Antsahadinta, Rovan’Ambohidratrimo, Rovan’Ilafy, Rovan’Ambohimanga, Rovan’Antananarivo.
Rovan’Antananarivo – Que la fête commence